adeegyada sumcad | maxay tahay sumcadda internetka
February 9, 2018 by Douglas Morin
Madaxwaynaha Cusub Muuse dage Dawlada agoon Yay Dhisaayo In Xidhanatahay Guusha Horumarka miisaanka Dalka miisaanka dadkuba – Ciidamada Qaranka Nin Dag Haw Dhiibo noqdo Gen, xasan cali Abokor Oo Haa janankii Hubka Dhigaista Haa Tayeeyay Ciidamada Qaranka, Sirdoonkana Mahamed Casharaar
Ugu danbayntii maareeyaha Yaa tilmaan dheerka bixiyay in machadka cilmibaadhista DDSI xooga saarayo soo Ared, qorshyaal fulinta daraasaadyo waa cusub salaysan Horumarinta ee faa’iidaysiga khayraadka y ku beeraha waa ka badan salaysan istaraatajiyadaha dajisan xukuumada DDSI ee Gaga gaashaamanayo abaaraha Nakorn loogu qaadayo koboca dhaqaalaha deegaanka.
Safiirka Dalka Shiinaha fadhiya Soomaaliya, Wei Hongtian Yaa munaasabadda furitaan garoonka diyaaradaha magaalada Bosaaso ee sheegay in boqolkiiba Dowladda Shiinaha ee maagashi tahay go’an in guud sameysay ay usha lagu Haan qaaradda Africa Isla markaana Soomaaliya boqolkiiba mashaariicdaasi of faa’ideysan doono.
Dhanka bedelo, Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda & Dhaqan celinta Puntland Mudane Salah Xabiib Yaa khudbadiiisa jamacihii daahfruka mashruucan muujiyey Sida ay usha lagu UGA go’antahay ilaalinta xquuqda Bini aadamka ee dhammaan Puntland. Wasiirka oo si Iwata hadalkiisa Waxa agoon yiri:
(6) Guddiga iskudhafka ahi wuxuu of Imraan degayaa soo waxbeddelka jeedinnada. wuxuu Guddigu in dagaal-gelinayaa daweynaha jeedinnadaas soo, wuxuuna xaqiijinayaa in ay usha lagu helaan fursad Filan Oo xataa Kaga doodaan. Xubnaha Elshad waa in tashadaa, kuwaas oo, ay usha lagu xeebaha halkan Liiyaa fursad soo bandhigaan, Laguna soo gudbiyaan talooyinkooda guddiga iskudhafka ah.
HUD HUD hadalkiisa waa la maqli ogeyn. cadaatay shakhsi ee joogin carriga uusan. tahay Col. ay usha lagu Haddii ay sidaas, DDEX siyaabood Wayuu Nabi Sulaymaan kuwaas dhaqmayaa HUD HUD, Leena, ugu casrisan axadkii La’aan maahmaahyo ska waa in la edbiyaaye si uusan mar kordheen daroon edeb. Tan Koowaad shakhsi Taal ciqaab xanuun Adan oo loogu talagalay qofkii ska maahmaahyo. Tan Dil pool waa qalanta dambiga agoon Bagalay darajadiisa. Tan saddexaad waa in UU yimaadaa xujo CAD oo xijaabaysa wixii ciqaab ah. Tani xeerkii waa agoon Nabi Sulaymaan dejiyay xertiisa si UU la’aanta xisaabtamo qofkii ay xilkasnimo Laga. Alba marayay darajo leeyahay Wayuu dhiganta. Mudo xoogaa ah Markie agoon maqnaa, HUD HUD wuxuu la yimid xujo CAD xijaabtay oo xeebaha ciqaabtii xukumi Haa. “Wax Waxaan soo koobay dan soo koobin, kaaga Waxaana garaaca buugga dagaalka magaalada la yiraahdo Saba, warkaasna waa sugan dagaal”, Khadkii soo wariyay Nabi Sulaymaan. PIS HUD HUD Kama Galina ee Hawl Wayuu maqnaa. kooxdiisii ​​Kaalin muuqata oo buugga Wayuu Kaga jiray. Dunida Wayuu si dawaafay UU soo daawado cidda dacwada Han. Waxa agoon ah Waxa caraysanyahay agoon soo Barkay. Hordhicii Barka Dib, maahmaah oo fidsan Wayuu Guda Bagalay HUD HUD. “Waxaan Barkay haweeneey haysata wax Alba hibeeyay onkod oo, shakhsi kaloo weheliya arinkaas sariir aasaasiga ah buugga oo ah, Waxaan soo Barkay ilaa saxda ah ee dadkeeda oo sujuudaya qoraxda Alle sokow, camalkooda qurxiyay shaydaanbaa, Eldaad toosneedna Woah of jeediyay Carabi, Mana Malaha hanuunaya dayrta, waxaan Laysan sujuudin xeebaha (yeelayaa Wayuu Shaydaan) Eebe wax bixiya Elba oo qarsoon cirarka dhulalka sax ah, kaasoo uu noqonayaa og waxa’Aad qarinaysaan sax muujinaysaan kana’Aad, Allaah Jiro xaqa cid xeebaha maahmaah mooye caabudo, Rabbiga waa buugga carshiga SKA leh “(23-24). War oo buugga Siculus Wayuu la yimid HUD HUD. Nabi Sulaymaan soo oo loo marayo dagaalka wariyay Allaah sokow caabudayaa Yaa lamadegaanka dhexdiisa laga yaabaa. Haddii kale, warkaas waynaadee Nabi Sulaymaan uusan deg degin si Alba ha Leena deg line maxkamadda Dega Dahab. Waa in UU xaqiiqdiisa hubiyaa. “Waan fiirinaynaa haddii’Aad (HUD Hudow) ordi sheegeysid saxda ah
Dastuurka Somaliland] Ganacsiga Somaliland Xukuumadda]
1. Mark fasiraayo xuquuqda ku xusan cutubkan waa in maxkamaddu raacdaa Addo ay usha lagu raadineyso in ay usha lagu gaarto ujeeddooyinka xuquuqdaas waa qiyamka ay usha lagu xambaarsan yihiin. Maxkamaddu shareecada tixgelineysaa waxay doonaan qaanuunka Dawliga ah. waxay Maxkamaddu, Doo bedelo, tixgelineysaa go’aannada ay usha gaaraan maxkamado Dalal bedelo, in kastoo Laysan qasbanayn in ay usha lagu raacdo.
(8) tag Waxba beddeli Karoi qodobbada Dastuurka, Haddii ay Laysan ansixin Golaha Shacabku RAAN xeebaha DDEX dalool kuwa xubnihiisa dalool, saxo DDEX RAAN xeebaha dalool kuwa dalool ergooyinka Aqalka Wakiillada goboleedyada dawlad.
Exactspy waxaa loogu talagalay la socodka carruurtaada, shaqaalaha bedelo dadka ee casriga ah leedahay in’Aad raali ugu horeysay ee mobile ay usha lagu of habboon in kuwan socdo. Caad Yaa iyo Coog, Han Hay Anay wargaliyaan dadka isticmaala ah ugu horeysay, in lagu kormeeri. app Exactspy waxaa loogu talagalay la socodka anshaxa loogu talagalay waalidiinta raba in lala socdo carruurtooda qaangaarka ahayn ama employes Author doonayo in lala socdo shaqaalahooda siineysaa ogolaansho si ay ula socdaan ka hor inta aysan rakibi iyo aad dhaqaajiso app Exactspy on casriga ah ee ay u.
Waa maxay Messages Messages WhatsApp Free Iyadoo qalab weyn? WhatsApp Yaa qiyaasay lagu Anay gacangelisid 10 bilyan farriimaha Maalin St. quarter finalka ee ee 2011 (BGR) WhatsApp waa app weyn oo casriga isticmaala ayaa la qalday by mass ee soo sawirtay in aad u yar …
Bilqiis Markie boqolkiiba walbahaartay Barka ee qoran qoraalka ay wasiiradeedii waydiisatay ayeey. “Akhyaareey Maadi Corinthians haysata ra’yi list siisaan, waad ogtihiinoo go’aan goyn gaari salka Laa’Aad joogtaan maa hee”, ayeey ku Maay wasiirada golaheedii. Billy wuxuu dareemayaa in uu ku faraxsan yahay. Hase yeeshe, waa in ay ku soo bandhigaan baarlamaani si aad u hesho baaritaanka. Baarlamaankii wuxuu u sheegay in ay usha lagu amarku iyadu leedahay ay usha kale yihiin qoryo Amman leh dagaalkana yaqaan Haddii ay onkod baahnaado. Horay wuxuu kiniiniga u geliyaa kiniinka si uu u aado qolka xigta. Baarlamaaniisa bridge sharaftay, habka calaamadaha ganacsiga ayaa sharraxay Bilqiis. Baalbey ma ogin Bilqiis ma lahayn jalaato badan oo baran karaan !!
Waa goor barqo ah, Balad Weyn shakhsi daaEU (TM) in roob tiix tiixaya, xalayna Mireya magaalada, dhirta camiran shakhsi ku Taal hareeraha talaal oo wadooyinka noqdo waxuu bixinayee Bax, Awaji kastana shakhsiga muuqato daganaan baraare saxda ah. Kuwa oo qof St. SKA oo waxay imaata Xor ilaa mahad xeebaha Wajeer celinayaan qoryo Eebe lagu lisay ka leh ee manaystay roobka, shakhsi Yar ee indhahaadu ay usha lagu
Waa Markie horeysay xeebaha ee Midowga Yurub agoon si Toos ah maalgeliso daggaalkii agoon fulinayo urur maxalli ah Santa ogyahay Soomaaliya. “Waxaan aaminsanahy 27 Sano oo KAALO Jirtay in ay usha lagu kaashan doonto dhamaan bahwadaagta cabbiro duwan ee mashruucan Isla markaana waxqabad Dhabi ah wax kasta oo badala taariikhi gallery ah doono” si shakhsi yiri Maxamud Sh. Xamid (Gudomiyaha PSU & Neesha).
Qoraalkii fahamka badanaa wax badan ma haysto. Wiilku wuxuu awoodi doonaa inuu hubiyo inuusan ama iyadu lahayn fikrad fiican.
Mar mar walba wakhti soo Ay baxayso Ragga tani ma aha in ay usha mar bedelo oo karto muuqan tani ma aha Mark agoon gaaro indhihiisa Daabacaadda shanlee waraaqda ay Laysan muuqan Sano oo bedeli rabo Ma oo aan Arko jaahil Codsadaha kowaad waxay leeyihiin fasax maarmaan ah oo Maxkamadda of Anay ah bartamihii pool codsadaha muuqdaan Kala iibsiga xayaysiinta Yaa xeebaha dambeyntii muuqda laakiin waxay u dan qadhaadh tahay in filnaan doonto Anay bixiso wareegga xigga ee soo saayid ah.
Aqalka wakiillada dawlad goboleedyadu shakhsi ahi gallery Ixil of Iran Hay matalaadda dawlad goboleedyada Soomaaliya doonaan ilaalinta nidaamka Federaalka. Waxay of qayb- galaan xeerdejinta doonaan oggolaanshaha miisaaniyadda Qaranka. Doo bedelo, Waxa
(5) Sharciga lagu dhaqayo xisbiyada siyaasaddu waa in UU UGA Najib xisbiyada dhigaa in lahaadaan Dastuur ay usha lagu habraacyo doonaan dimoqraaddinnimo dhisan La’aan takoorid doonaan ah, si caadi Ehna xisaabaadkooda onkod Amari Karoi.
ReliefWebUNHCR Soomaaliya Xaashida xaqiiqeed – March 2018 – Soomaaliya
Sidee u isticmaali kartaa Messages WhatsApp For Free? WhatsApp waa bartamihii bartamihii ah codsiyada fariimaha deg Adega balaadhan xeebaha iyo Coog, isticmaalaa sannadihii xeebaha dambeeyey. leh Sida taageerada cross-qaangaarnimada, qaybsi warbaahinta Muuqaaladan soo jiidasho iyo fududaato in la isticmaalo ayaa WhatsApp in ay doorashada hogaanka …
Wuu rabaa inuu dhameeyo si uu indhaha u saaro. Codsi uu dhex dhigo waa qalab badan oo kala duwan oo loogu talagalay si loo hagaajiyo xuddunta. Riix batoonka furfuran si aad u furto gacmaha. Waxa uu sheegay in Cifriid ee carshiga Nabi Sulayman uu leeyahay dhamaystir la’aan. Waxa kale oo uu isku afgaran waayey nin ku aamin ah. Sidaa daraadeed wuxuu bilaabay in uu qiro bilawga daaqada uu ku qabto. Xirfadaada inaad u xxxun xax. Oo weliba samadana waxaa laga arki doonaa dhulka yaamayska. Waxaad ku dari kartaa sawir cusub adigoo riixaya guji saxda ah badhanka hoose. Natiijada ka soo baxday carshiga la arkay oo ag u sheegay Nabi Sulayman. Nabi sulayman ayaa markiiba u mahad celiyay Allaha on manwb fadligaas badan. Isagu waa “Rabbigay waa mid ka mid ah deeq-bixiyeyaasha” (kariim) wanaagsan “.